सुदूरपश्चिम ईञ्चार्जबाट भीम रावललाई हटाइयो ! « Ok Janata Newsportal
सुदूरपश्चिम ईञ्चार्जबाट भीम रावललाई हटाइयो !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलको ठाउँमा लेखराज भट्टको नेमप्लेट रोखेको छ ।
कैलालीको धनगढीस्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बुधबार ओली पक्षले लेखराज भट्टको नेमप्लेट राखेको हो । नेकपा हुँदा ओलीलाई साथ दिएका पूर्वमाओवादी नेता भट्ट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि एमालेमा रहने निर्णय पुगेका छन् । तर, उनको जिम्मेवारी के हुने भन्ने केन्द्रले टुंगो नलगाउँदै एमालेका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा नेतृत्वको टोलीले भट्टको नामको बोर्ड पार्टी कार्यालयमा रोखेको छ ।
भीम रावलको नेमप्लेट तो’डफोड गरिएको छ । सोही क्रममा एमालेको दुई पक्षबीच झडप समेत भएको थियो । झडपपछि एमाले कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । केही समयअघि ओली र प्रचण्ड–माधव समूह छुट्टिएपछि ओली पक्षले भट्टलाई इन्चार्ज बनाएको थियो । साविक एमालेमा रावल प्रदेश इन्चार्ज थिए ।
एमाले सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाले आफ्नो इन्चार्ज भट्ट नै रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘अहिले पनि हाम्रो इन्चार्ज लेखराज भट्ट नै हुनुहुन्छ । राजनीतिक रुपमा अगाडि बढेको कुरा बदर भनेको होइन । पुराना पार्टीलाई पार्टीविहीन बनाउन नहुने हुनाले एमाले र माओवादी केन्द्र नाम दिइएको छ । पहिले जे पद थिए, त्यहीँ हुन्छन् भनेर अदालतले बोलेको होइन ।
उनले इन्चार्ज रावललाई इंगित गर्दै आफ्नो पार्टीमा अनुशासित कार्यकर्ता चाहिएकाले बबन्डर गर्ने आवश्यक नभएको बताए । उनको भनाइ छ, ‘एमालेमा नेताको कमी छैन । बबन्डर गर्नेका लागि ढोका बन्द छ। यो पार्टीलाई ध्वस्त बनाउनेका लागि एमालेको ढोका बन्द छ ।’
तर, बोर्डहरु फाल्नेका विषयमा उनले छानविन गरेर कारबाही गर्ने पनि बताएका छन्।
गठबन्धनको आकस्मिक बैठक बस्दै, माओवादीले मन्त्रीको नाम बुझाउँदै